ကချင်ပြည်နယ်၊ လိုင်ဇာမြို့အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူတွေ ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ဝ ရက်နေ့ ဒီကနေ့ဆိုရင် မန္တလေးတိုင်း၊ ပလိပ်မြို့ကို ရောက်ရှိနေပြီး လမ်းလျှောက်သူတွေ ထဲက သံဃာတော်တစ်ချို့နဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ဟာ ပင်ပန်းမှုဒဏ် ခံစားနေရပါတယ်။
ရန်ကုန်က စတင်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဟာ အခုဆိုရင် ရက်သတ္တပတ် (၃) ပတ်မြောက် ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး လမ်းခရီးပင်ပန်းလွန်းတဲ့အတွက် သံဃာတော် (၁) ပါးဟာ ခြေထောက်အရိုး ထိခိုက်ထားပြီး နောက်ထပ် သံဃာတော် (၂) ပါးကတော့ ခြေထောက်တွေ ယောင်ယမ်းလာတာကြောင့် သီတင်းသုံးရာ စစ်ကိုင်းကို ပြန်လည်ကြွသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်သူတစ်ဦးကတော့ နှာခေါင်းသွေး လျှံတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခရီးရှည်တာကြောင့် ပင်ပန်းနေကြပြီး လမ်းလျှောက်သူတစ်ချို့ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာတဲ့ အခြေအနေကို ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစည်သူက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"လမ်းလျှောက်တာ မိုင်တွေများတဲ့အတွက် သံဃာတော် (၂) ပါးက ခြေထောက်တွေ ရောင်နေတယ်၊ ကူမဲကနေ သီတင်သုံးတဲ့ စစ်ကိုင်းကို ပြန်သွားပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ကို ဒေသခံတွေ စီစဉ်ပေးထားတာတော့ ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ ဒေသဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တွေက ညတိုင်း ညတိုင်း လာပြီး စစ်ဆေးပေးတယ်"
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူတွေဟာ အခုဆိုရင် အင်အား (၅၀) ကျော်ရှိလာပြီး လိုင်ဇာမြို့ကို နောက်ထပ် (၁) လခန့်မှ ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
အရေး အကြီးဆုံးက ရေများများ သောက်ဘို့နဲ့ ဘိနပ်ကောင်းဘို့ပါပဲ။ ဗမာပိန်းတန်းဖိနပ်တွေ ရာဘာ ညှပ်ဘိနပ်တွေနဲ့ မဖြစ်ပါဘူး။ အားလုံး၊ ယောက်ျား မိန်းမ မရွေးနဲ့ သံဃာတော်တွေပါ အောက်ခံ ကောင်းကောင်းနဲ့ walking shoes with good sole စီးသင့်ပါတယ်။ ခြေအိတ်ထူထူကောင်းကောင်းလဲ ၀တ်ကြပါ။ မန္တလေးကျော်ရင် ရာသီက အေးလာပြီ။
There are some remedies you can do for long walks.
1. raise your feet,legs,thigh straight so that it would form about 30 degree from the floor using pillows or similar soft materials about 15 minutes before go to bed.
2. Eat more soluble fibers foods, such as soup of onion,cauliflowers, etc.
3. drink electrolyte if necessary.
Feb 10, 2013 03:52 PM